Ma guriga ayaa ah meesha ugu badan ee haweenka Soomaalida lagu dilo? - BBC News Somali
Hay'adda qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha maandooriyeyaasha iyo dambiyada ayaa warbixin ay isbuucan soo saartay ku sheegtay in sannadka 2018-ka oo kaliya caalamka lagu dilay qiyaastii 137 haween ah.
Tiro badan oo ka mid ah dumarkaas waxaa loo dilay arrimo la xiriira qoyska, waxaana ka mid ah haweeney xalay uu ninkeeda ku dilay magaalada Jowhar ee xarunta u ah maamul goboleedka Hirshabeelle ee Soomaaliya.
Jamiilo Sh.Cali Ibraahin oo ahayd 32 jir xaamilo ah ayuu toogasho ku dilay seygeeda oo lagu magacaabo Cali Dheere, oo ah maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar.
Sababta dilka keentay ayaa lagu sheegay muran xagga qoyska ah oo dhex maray lamaanahaas, waxaana eedeysanaha soo xiray ciidanka maamulka Hirshabeelle oo hadda baaritaaanno wada.
Warbixinta ay dhawaan soo saartay hay'adda Qaramad Midoobay ee UNODC ayaa lagu sheegay in dambiyada ka dhanka ah haweenka ay u muuqdaan kuwo guriga ka dhigaya meesha ugu halista badan ee dumarka ay kula kulmaan dilka iyo dhibaatooyinka kale.
Waxaa sidoo kale war bixintaas looga hadlay dhacdooyinka kale ee kusoo afjarma dilka haweenka ee ka dhaca guud ahaan dunida.
Soomaaliya ayaa ka mid ah waddamada sannadkan laga soo tabiyay dhibaatooyin uu ka mid yahay dilka oo loo geystay dumar fara badan.
Hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa goor sii horreysay sheegtay in tacaddiyada haweenka Soomaaliya loogu geysto ay sii bateen balse aan loo soo tabin si joogto ah.
Xamaas oo joojisay furitaan TV-ga Haweenka
Haweenka Maraykanka oo ku naaloonaya guulo siyaasadeed
Amnesty ayaa xustay in labadii sano ee ugu dambeysay ay 400 oo kiis oo ku saabsan waxyeelleynta dumarka ay ka dheceen koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, 312 kiis oo noocaas ah ay ka dheceen Puntland halka 271 kiisna laga soo tabiyay Somaliland.
Qaar ka mid ah dilalkii sannadkan 2018-ka loo geystay haweenka ee ay soo tabisay warbaahinta Soomaaliya
-1-dii bishii Abriil, haweeney la sheegay iney ka tirsaneyd ururka haweenka ee degmada Heliwaa ee gobolka Banaadir ayaa lagu dilay meel aan ka fogeyn xaafaddeeda
-1-dii bishii Meey, kooxo hubeysan ayaa suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho ku dileen gabar u shaqeyneysay hay'adaha gargaarka.
-2-dii bishii Meey, rag hubeysan ayaa xaafadda Baar ubax ee magaalada Muqdisho ku dilay haweeney ka ganacsan jirtay Qaadka.
-5-tii bishii Meey, waxaa la soo tabiyay in degmada Wadajir uu nin ku dilay xaaskiisa, walaashiis iyo 2 ruux oo kale, ka hor inta uusan isagana is dilin.
-17-kii bishii Meey, haweeney ayaa lagu dilay degmada Hawlwadaag ee gobolka Banaadir, lamana sheegin sababta loo dilay.
-12-kii bishii Luulyo, koox dabley ah ayaa degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir waxay ku dileen haweeney la sheegay iney ahayd ganacsato.
-25-kii bishii Oktoobar, haweeney ka tirsaneyd booliska Soomaaliya ayaa lagu dilay agagaarka degmada Hodan ee gobolka Banaadir.
-21-kii bishii Siteembar, haweeney ardayad ahayd ayey kooxo hubeysan ku dileen gudaha jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, xilli ay fasalkeeda ku jirtay.
-5-tii bishan Nofeembar, gabar macallimad ah ayaa lagu dilay degmada Wadajir ee gobolka Bnaadir xilli ay la socotay Mooto Bajaaj.
Sannadkii la soo dhaafay ee 2017-ka ayey sidoo kale Soomaaliya iyo meelo kale oo ka tirsan caalamka ka dheceen dilal fara badan oo loo geystay haweenka, sida lagu sheegay war bixinta Qaramada Midoobay.
Hase ahaatee in ka badan kala bar ka mid ah 87,000 oo haween ah oo caalamka lagu dilay sannadkii 2017-kii waxay ku dhinteen gacanta dadka ugu dhow ee eheladooda ah.
Kala bar kasii mid ah tiradaas oo lagu qiyaasay 30,000 waxaa dilay lamaaneyaashooda halka 20,000 oo kalena ay dileen dad qaraabadooda ah.